ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): October 2009
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:17 AM0comments Links to this post
သံဃာတော်များနှင့် Pirate Softwares
ဦးလောကနာထ (www.lknt.org): ဒကာလေး ဝိမုတ္တိရေ... ဘုန်းကြီးတို့ စည်းရိုးနားတော့ ရောက်လာပြီ... ပိုင်ရှင်က ရောင်းစားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲများကို တရားမဝင် အသုံးပြုရင် ဘုရားဝိနည်းတော်အရ အပြစ်ရှိပါတယ်... အပြစ် အကြီး အသေးကတော့ အခြေအနေအားလုံးအပေါ်မှာ မူတည်ပါလိမ့်မယ်... လေးနက် သိမ်မွေ့မှုတော့ အများကြီး ရှိပါတယ်... ရှောင်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ...
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:44 AM0comments Links to this post
At present, Buddhism continues to gain an ever-widening acceptance in countries and societies far beyond its original home. Many people throughout the world, through their own careful choice, are adopting Buddhism's peaceful, compassionate and responsible ways as guiding principles in their lives. Meditation has always been at the very heart of the Buddhist path, and as its proven benefits to both mental and physical well-being are becoming more widely known, meditation grows increasingly popular. When stress is shown to be suchamajor cause of human suffering in modern society, the quieting practice of meditation is even more valued.
The world in the 21st century is too small and vulnerable for us to live in isolation or conflict. In all its long history no war has ever been fought to spread the Buddha's teachings. Tolerance, loving-kindness and forgiveness, essential for world harmony and individual happiness, are generated and developed through virtuous behavior and more deeply through Buddhist meditation. When put into practice in everyday life, the path of the Buddha gradually cultivates the heart with harmlessness. This is then offered to all beings, especially oneself. There is no place for dwelling in guilt or self-hatred in Buddhism.
The down-to-earth teachings and practices of the Buddha culminate in pure joy, unshakable serenity and penetrating wisdom, qualities identified with Buddhism for over 2,500 years and sorely needed in today's world. This gentle and sagacious peace of enlightenment is what makes the Buddha's message timeless and always vitally relevant.
What is Buddhism? (အပိုင်း ၁ မှ အပိုင်း ၁၁ ထိ)
၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀
ကျွန်တော် အမ မသစ္စာအလင်း (www.thitsaralin.com) ဆီက မွေးနေ့ လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ ဓမ္မစာအုပ် (၃)အုပ်ထဲက ပထမစာအုပ် ဒီမှာပြီးဆုံးပါတယ်ခင်ဗျား။
မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းတွင် What is Buddhism? စာအုပ်ပါ အခန်းများအားလုံးကို စပိန်ဘာသာ ဖြင့် ပြန်ဆိုပြီး ဖော်ပြပေးသွားမည့်အကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ စပိန်ဘာသာစကားသုံးသော နိုင်ငံခြားသားများအား ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း ဖြန့် ဝေပြောကြား သာသနာပြုလိုတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက် အထောက်အကူတစ်ခု ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည် မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:59 AM0comments Links to this post
Doing နှင့် Having ဟာ ကိုယ်ကျိုးသက်သက်ဖြစ်နေရင် စိတ်ချမ်းသာမှုအစစ်ကို မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Being ကို လေးလေးနက်နက် နားလည်သင့်တယ်။ Being ဆိုတာ ဘာလဲ - မေတ္တာစိတ်နဲ့ နေတာ Being၊ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ - I amaloving person. လို့ပြောလို့ ရတယ်။ am ဆိုတာ Being ကိုပြောတာနော်။ လုပ်နေတာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ငါဟာ ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်တဲ့သူ၊ သနားတတ်တဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ သူများမှာ အဆင်ပြေတာကို ၀မ်းသာတတ်တဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:45 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:56 AM0comments Links to this post
Buddhism flourished in India after the passing away of the Buddha and spread peacefully southward as far as Sri Lanka, northward to the Himalayas, westward to what is now Iran and Afghanistan and eastward to China, Sumatra and Java. After 500 yearsanew sect called Mahayana emerged, distinguishing itself from the lineage presently known as Theravada. Mahayana tended to be more liberal, freely adapting to new cultures, while Theravada was more conservative, attempting to maintain continuity from the time of the Buddha. With the arrival of new scriptures, some Mahayana schools depicted the Buddha asagod and replaced the goal of attaining Arahantship with the Ideal of the Bodhisattva,aperson striving to becomeaBuddha in order to help as many beings as possible. The Theravada school preserved and looked to the original teachings and lifestyle of the Buddha as its guide.
With the Muslim invasions of the Indian sub-continent in the 11th and 12th centuries, Buddhism was violently suppressed and eventually eradicated in its native country. By that time however, Mahayana had taken root in China and from there spread to Japan, Korea and Vietnam. The most popular of the many different sects of those countries is Zen Buddhism. Mahayana also spread to Tibet, incorporated the local animist religion of Bon, and then spread further to Mongolia and Bhutan. The most well-known Tibetan monk and Nobel Peace Prize laureate is the Dalai Lama. Theravada established itself mainly in Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Laos and Cambodia. Its scriptures are known as the Pali Canon, the oldest complete Indic record of what the Buddha taught.
What is Buddhism? (အပိုင်း ၁ မှ အပိုင်း ၁၀ ထိ)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:01 AM0comments Links to this post
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ လောကီစည်းစိမ်တွေကို စွန့် ခွာပြီး တောထွက်၊ ရဟန်းပြု၊ လောကုတ္တရာတရားကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ရတာမို့နေ့ စဉ်ဘ၀နှင့်ဆိုင်တဲ့ လောကီကိစ္စတွေ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွေနှင့် မပတ်သက်သလို ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာ ဆန့် ကျင်ဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အတော်များများမှာ ရှိနေတာပါ။ တဖက်ကတွေးကြည့်ရင် အဲဒီအယူအဆရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကျင့်ဝတ်တရားတွေကို စီးပွားရေးလုပ်ရာမှာ လိုက်နာကျင့်သုံးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့သိသာပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ရှေးနှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ က လူ့ အဖွဲ့ အစည်းထဲမှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ အယူဝါဒဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်မှောက်ခေတ်ရဲ့အင်မတန်မှ ရှုပ်ထွေးခေတ်မီတဲ့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြပါတယ်။
ဒီခေတ်ရဲ့ ရှုပ်ထွေးလာတဲ့စနစ်တွေဟာ အသေးစိတ် ညွှန်ကြားမှုတွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းဆက်တွေပါ။ အသေးစိတ်ညွှန်ကြားမှုတွေက သိပ်ပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိလွန်းတော့ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါကို လိုက်ပြီး အမြဲပြောင်းလဲနေရတာပဲ။ ဒါကြောင့် အရင်က ရိုးစင်းတဲ့လူ့ အဖွဲ့ အစည်းနှင့် စီးပွားရေးလောကဟာ အခြေအနေ အချိန်အခါတွေနှင့်ညီအောင် ပြောင်းလဲရင်း ရှုပ်ထွေးတိုးတက်ခေတ်မီတယ်ဆိုတဲ့ ဒီကနေ့မျက်မှောက်ခေတ်ကို ရောက်လာတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အသေးစိတ်ညွှန်ကြားမှု အများစုရဲ့အပြောင်းအလဲဟာ နည်းလမ်းတွေ၊ ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာတွေပဲ ပြောင်းလဲတာဖြစ်ပြီး အခြေခံနိယာမ အတွေးအခေါ်တွေ၊ အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေကတော့ သိပ်မပြောင်းလဲတာကို တွေ့ ရတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဝါဒဟာ ရှေးခေတ်လူ့ အဖွဲ့ အစည်းက ပေါ်ပေါက်လာတာမို့ဒီခေတ်ရဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ စီးပွားရေးပြဿနာတွေကို ရှင်းမပြနိုင်ဘူးလို့ တော့ မဆိုနိုင်ဘူး။
ဥပမာ-ဒီနေ့ ခေတ်ရဲ့ အဆောက်အဦတွေမှာရှိတဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်ကိုကြည့်။ ရိုးရိုးခတ်လို့ ရတဲ့ သော့ခလောက်တစ်ခုကနေ ခေတ်မီတိုးတက်လာလိုက်တာ၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ သော့ကဒ်ပြားတွေနဲ့ ၊ လျှပ်စစ်နဲ့ဖွင့်ပိတ်လို့ ရတဲ့ တံခါးတွေနဲ့ ၊ ဗီဒီယိုကင်မရာတွေနဲ့ ၊ လေဆာရောင်ခြည် အဟန့် အတားတွေနဲ့ ၊ အလိုအလျှောက် အချက်ပေးစနစ်တွေနဲ့ ၊ ဒါတွေဟာ လုံခြုံအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ (တိုးတက်လာတဲ့) အသေးစိတ်တွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေပေါ့။ တစ်ဖက်က လုံခြုံရေးကို ထိပါးမယ့်သူတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုအပေါ်မူတည်ပြီး နည်းလမ်းတွေနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလေ။ တကယ်လို့ များ သူတစ်ပါးရဲ့ ပစ္စည်းကို ပိုင်ရှင်က မပေးဘဲ မယူရဘူးဆိုတဲ့ အဒိန္နာဒါနာ အခြေခံစည်းကမ်းလေးကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူတွေက အခုထိ စွဲစွဲမြဲမြဲ လိုက်နာနေတုန်းဆိုရင် ဘာသော့ခလောက်ကိုမှ တီထွင်နေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ကမ္ဘာကြီးမှာရှိနေတဲ့ သယံဇာတပစ္စည်းတွေ ဘယ်လောက်များများ သက်သာသွားလိုက်မလဲ မသိဘူးနော်။
ပြဿနာက လူတွေဟာ အသေးစိတ်တွေနောက်လိုက်နေပြီး အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မကျင့်သုံးကြလို့ ပါ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်က လိုက်နာရတာလွယ်ပြီး အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေက အသုံးချဖို့ ခက်တာကို အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေကို ကျင့်သုံးချင်ရင် ဒီစည်းမျဉ်းတွေကို စွဲမြဲယုံကြည်မှသုံးလို့ ရတယ်။ စွဲမြဲယုံကြည်မှ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အခြေအနေတိုင်းမှာ ဘယ်လိုသုံးရမလဲလို့သိနိုင်တယ်။ မစွဲမြဲ မယုံကြည်ရင်လည်း ဒီစည်းမျဉ်းတွေက ချိုးဖောက်ရတာ သိပ်လွယ်တယ်။ ငါးပါးသီလ မလုံတော့တဲ့လူတွေ များလာတာကိုပဲ ကြည့်ပါလား။
မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အဲဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံကျတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေက အကြောင်းရင်းကိုလည်း ဖော်ထုတ်ပြနိုင်ပါတယ်။ အဖြေရှိတဲ့နည်းလမ်းကိုလည်း ညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖြေရှိတဲ့လမ်းဟာ အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းလိုက်မှ ရောက်မယ့်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေက သူတို့ တစ်ကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ အသေးစိတ်တွေကနေ အခြေခံတန်ဖိုးတွေကို ပြောင်းပြီး စဉ်းစားကြည့်ဖို့ တော့ မကြိုးစားကြသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အရင်တုန်းက စစ်ပွဲတွေရှိသလို အခုလည်း စစ်ပွဲတွေရှိနေတာပဲ။ အရင်တုန်းက စီးပွားပျက်ကပ်တွေဖြစ်ခဲ့သလို အခုလည်း စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းတွေ ဖြစ်နေတာပဲ။ သူတို့ ရဲ့ အတွေးခေါ်တွေက မပြောင်းတော့ အရင်ကမှားတဲ့ အမှားတွေကို ဆက်မှားနေတာပဲ။ ခေတ်မီတိုးတက်သောလို့ပြောရမှာတောင် ခပ်ခက်ခက်ရယ်။
ဒီလိုပြောလို့လက်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာ ဖွံ့ ဖြိုးနေသေးတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ ပြဿနာတွေ မတွေ့ ရတော့ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် အရေအတွက်အားဖြင့် လူဦးရေရဲ့၉၀% နီးပါးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ။ အများစုဟာ မိရိုးဖလာအလိုက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်လာတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလူတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့် အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေကို တကယ်သိသလား၊ မသိဘူးလား၊ သိရင်လည်း တကယ်လိုက်နာသလား၊ မလိုက်နာဘူးလား မပြောနိုင်ဘူး။
ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ အခြေပြုပဋ္ဌာန်းတရားတော်စာအုပ်ထဲမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်ရာမှာတောင် အကုသိုလ်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်တတ်ကြတယ်ဆိုတာ သုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ ဒါတောင်ဆရာတော်က ခုခေတ်မှာ မှိုလိုပေါက်နေတဲ့ စည်ဘီယာဆိုင်တွေကို မမြင်သွားရ။ ဘီယာဆိုတာ အယ်ကိုဟော ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ပဲပါတာမို့အရက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ လက်တစ်လုံးခြားစကားတွေကို ကြားမသွားရ။ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဈေးနဲ့ ဘီယာတစ်ခွက်ဈေးယှဉ်ကြည့်ရင် ဘီယာသောက်ရတာ ပိုတန်တာပေါ့ဆိုတဲ့ လူတွေကို ဆုံးမ မသွားရရှာဘူး။ ဒီလို ဗုဒ္ဓဘာသာ မပီပြင်တဲ့ အပြုအမူတွေ နေ့ စဉ်ဘ၀ထဲမှာ ပိုပြီးနေရာယူလာတယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာက ညွှန်းဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ဝေးသထက်ဝေးလာတော့မှာပဲ။ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ကြွှင်းကျန်ပြီး၊ ဘယ်အရာတွေ ပျောက်ကွယ်ကုန်ပြီလဲဆိုတာ ဂရုပြုသင့်တယ်။
Buddhist Economics (a middle way for the marketplace) ဆိုတဲ့ Bruce Evans နဲ့Jourdan Arenson ရေးသားစုစည်းတဲ့ စာအုပ်မှာ စီးပွားရေးပညာရဲ့အခြေခံက ဘယ်လိုယူဆတယ်။ ဒီယူဆချက်တွေကြောင့် ဘယ်လိုအပြုအမူတွေဖြစ်လာတယ်။ အပြုအမူတွေရဲ့ရလဒ်တွေက ဘာတွေဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အခြေခံစီးပွားရေးအယူအဆတွေနဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားတယ်ဆိုတာကို ရိုးရိုးလေးရှင်းပြထားပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ တင်ပြချက်တွေအတွက် ကိုးကားမှုတွေကိုလည်း ဒီဃနိကာယ်၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊ သံယုတ္တနိကာယ်၊ ၀ိနယပိဋက၊ ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်၊ အဘိဓမ္မာစတဲ့ ဗုဒ္ဓစာပေတွေကနေ တိတိကျကျ ထုတ်နုတ်ကိုးကားထားတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ အခန်း ၅ ခန်းပါပါတယ်။ အခန်းတွေကို ခေါင်းစဉ်ပေးမထားပါဘူး။ ဒီဆောင်းပါးမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေဟာ စာရေးသူက သင့်တော်မယ်ထင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတွေ တပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ “ဒီစာဟာ Buddhist Economics စာအုပ်ရဲ့ ဘာသာပြန်မဟုတ်ပါဘူး။ စာအုပ်ထဲက ထိထိမိမိရှိလှတဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေကိုပဲ ထုတ်နုတ်ဆွေးနွေးမှာပါ” မူရင်းစာအုပ်ရဲ့ ယူဆချက်ကို အဓိကထားပြီး ဆွေးနွေးပေမယ့် စာရေးသူရဲ့ သုံးသပ်ချက်တစ်ချို့ လည်း ရောနှောပါဝင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခန်း-၁ ဟာ စီးပွားရေးပညာရဲ့အကန့် အသတ်ရှိပုံတွေကို တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း ၃ ပိုင်းခွဲပြီးတော့ တင်ပြထားပါတယ်။ ဇောက်ချထုတ်လုပ်ခြင်းရဲ့ ပြဿနာ (The Problem of Specialization)၊ ဓမ္မ၏ အဓိပ္ပါယ်နှစ်မျိုး (The Two Meanings Of Dhamma)၊ ကိုယ်ကျင့်တရားကစီးပွားရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်ပုံ (How ethics condition economics) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးပညာရဲ့ အကန့် အသတ်တွေဟာ အထူးပြုလွန်းအားကြီးလို့ ဖြစ်ရတာပါ။ စီးပွားရေးပညာရဲ့ အတွေးခေါ်က ဘောင်ကျဉ်းလှတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စီးပွားရေးသီအိုရီတွေဟာ လက်တွေ့ သက်သေပြနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုပဲ ထည့်စဉ်းစားတယ်။ လက်တွေ့ သက်သေမပြနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေ (ဥပမာ- ကိုယ်ကျင့်တရား) ကို ထည့်မစဉ်းစားဘူးတဲ့။
ဒါ အမှန်ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် သင်္ချာနည်းနဲ့သက်သေပြချင်တဲ့ စီးပွားရေးပညာရဲ့သီအိုရီတွေမှာ ယူဆချက် (ချွင်းချက်)တွေ ထားရတယ်ဆိုတာ အခြေအနေအားလုံးကို ထည့်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အားနည်းချက်ကို ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘောဂဗေဒဘာသာမှာ အလွန်ကျော်ကြားတဲ့ ချွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ (everything remains unchanged) “တခြားအရာတွေအားလုံး မပြောင်းလဲဘူး ဆိုကြပါစို့ ...” ဆိုတဲ့စကားဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို့ ဆိုကုန်ကြပြီ။ ဟုတ်တယ်လေ၊ တကယ့်လက်တွေ့ မှာ ဘယ်နှယ့်လုပ်ပြီး တခြားအရာတွေအကုန်လုံးကို ခဏဆိုင်းထားလို့ ရပါ့မလဲ။
ဒါ့အပြင် စီးပွားရေးပညာရဲ့ သက်သေပြနိုင်တဲ့အချက်တွေပေါ်မှာ အမှီပြုနေမှု (objectivity) က အမြင်တိမ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အရှည်ကိုမကြည့်ပါဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ချက် တစ်ရပ်ကနေဖြစ်လာတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားမဲ့မှုရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ထည့်မစဉ်းစားပါဘူး။ ဗုဒ္ဓရဲ့ အမြင်အရ အပြုအမူတစ်ခု၊ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဟာ လူတစ်ဦးအပေါ်မှာရော၊ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းကိုရော၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုရော အကျိုးသက်ရောက်မှု ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကို ထည့်စဉ်းစားရပါမယ်။
စီးပွားရေးပညာဟာ အလွန်ပဲ သိပ္ပံနည်းကျဖြစ်ချင်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာဟာ ရုပ်လောကကိုသာ လေ့လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးပညာဟာလည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုသာ စဉ်းစားပြီး သူနဲ့ ဆက်စပ်နေသေးတဲ့ တခြားအရာတွေကို လျစ်လျူရှုထားပါတယ်။ သဘာဝလောကကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေ၊ ပြဿနာတွေအားလုံးဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အပြန်အလှန် ဆက်စပ်နေတာဆိုတော့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုသာ စဉ်းစားပြီးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ အဖြေတွေနဲ့ တကယ်ပြဿနာတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် မစဉ်းစားပေမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်အကျိုးသက်ရောက်မှာပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်က စီးပွားရေးပညာမှတော့ လူတစ်ဦးချင်းရော၊ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းရော၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရော အားလုံးအတွက် တူညီတဲ့ ရည်မှန်းချက်ထားနိုင်မယ့် တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အပြန်အလှန်မှီခိုနေတဲ့ စည်းကမ်းတွေကို ချပေးပါတယ်။
အပိုင်း (၁) ကို ဖတ်ရန်
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:10 AM0comments Links to this post
The Buddhist monastic community, the Sangha, was created by the Buddha for those people who wanted to fully dedicate their lives toward the realization of enlightenment. The monastic lifestyle enables one to leave behind the worries and entanglements of lay life and focus almost all one's time and energy on the goal of liberation. It also offers the opportunity to live in solitude, an important factor for the development of deep states of meditation and wisdom. The Buddha also institutedadetailed and refined code of conduct and discipline to aid monastics in their cultivation of virtue.
Between Buddhist monastics and Buddhist lay people, there isarelationship of inter-dependence. The Sangha relies on the lay Buddhists for their material needs, and in return the monks and nuns provide the lay community with spiritual guidance and moral support. As long as the Sangha continues to practise in accordance with the code of monastic discipline and strives for the attainment of enlightenment, Buddhism will beastrong and vibrant religion.
What is Buddhism? (အပိုင်း ၁ မှ အပိုင်း ၉ ထိ)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:35 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:02 PM0comments Links to this post